पार्टीमा मनोनयन गर्न देउवालाई सकस,गच्छदारलाई उपसभापती वनाउन विधानले राेक्ने - देश विकास डटकम
काठमाडाै , १ वैशाख । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकस परेको छ। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई निर्णय क्षमता नभएको आरोप लगाउँदै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका देउवाले सभापति भएको दुई वर्ष एक महिना बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकेका छैनन्।
महासमिति बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी विधान संशोधन गरेर यो कठिनाइ व्यवस्थापन गर्ने योजनामा देउवा छन्। तर, वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको सहयोगबिना देउवाको यो योजना पूरा हुने सम्भावना न्यून छ। पौडेल समूह १४ औं महाधिवेशनअघि नै कार्यान्वयन हुने गरी पदाधिकारी या केन्द्रीय सदस्य थप गर्न दिने पक्षमा छैन। कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
← तपाईलाई थाहा छ, कस्तो हुन्छ यौन साथीको विषयमा महिलाको रुची ?
भारतमा आईपीएल, करोडौंको बाजी नेपालमा , कसरी लगाइन्छ बाजी ? →
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा थपिने ४० सदस्यकाे सूची तयार (नामसहित)
५ जेष्ठ २०७५, शनिबार १४:४३ Saroj Poudel 0
सरकारको स्वेतपत्र भन्छ : सरकारी ढुकटी रित्तो
१६ चैत्र २०७४, शुक्रबार १७:२४ Saroj Poudel 0
२५ चैत्र २०७४, आईतवार १६:२३ Saroj Poudel 0